Madaxwaynaha DDSI Iyo Waftidii Uu Hogaaminayay - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Iyo Waftidii Uu Hogaaminayay
Maqale(CN) 22ka August 2015,Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftidii uu hogaaminayay ee lagu casuumay kasoo qaybgalka shirwaynihii 12,aad ee ururka TPLF oo soo gaadhay xarunta deegaanka Tigray ee magaalada Maqale si wayna loogu soo dhaweeeyay ayaa waxaa saaka si rasmi ah ugu bilaabmay shirwaynihii.
Shirkan oo kusoo beegmay xili lagu jiro xuskii 3,aad ee geeridii Raisal wasaarihii hore ee dalka mudane Meles senawi iyo xili ay dalkeena kahanaqaaday Horumar, Nabadgelyo iyo Dimoqraadiyad balaadhan ayaa waxaa khudbad dhaxalgal ah kasoo jeediyay Madaxwaynaha DDSI.
Wuxuuna madaxwaynuhu hadalkiisii kubilaabay magaciisa, magaca xisbigiisa iyo magaca shacabka deegaanka soomaalida itoobiya isagoo uga mahadceliyay ururka TPLF casuumada shirwaynaha iyo sida ay raaliga uga yihiin. wuxuuna madaxwaynuhu ku booriyay xisbiga TPLF sidii horayba looga bartay inay go'aamo wax ku ool ah oo midho dhal leh kasoo baxaan shirwaynahan. Waxaa kale oo uu sheegay in ururku yahay mid usoo halgamay siduu dadka reer itoobiya uga saari lahaa cadaadiskii gumaysigii dhargiga ee wakhtiga dheer haystay. Halgankaa dheer ee ururku soo galayna ay kunaf-waayeen kumanaan. Isagoo tilmaamay in ururka TPLF utaagnaa danaha shacabka Tigray bilawgii hadase utaagan yahay xuquuqaha qawmiyadaha dalka guud ahaan.
Waxaana intaa dheer ayuu yidhi madaxwaynuhu,'' in Itoobiyadii caalamku u arki jiray faqriga ay maanta ugu horayso wadamada xawaaraha ugu sareeya horumarkoodu kusocdo iyadoo madaxwayne Obama arintaas inoo qiray.''
Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu khudbadiisii kaga waray xaalada deegaanka soomaalida isagoo sheegay in deegaanku horay u ahaa meel dhimasho, hoog iyo halaag yaalo, meel ururada nabadiidka ahi ay ku xasuuqaan shacabka deegaanka iyo ka dalka labadaba. Balse, kadib markii lahirgaliyay qorshihii cilmiyaysnaa ee uu diyaariyay Raisal wasaarihii hore- dawlada dhexe, ciidanka qaranka, shacabka iyo DDSI oo iskaashanaya ayaa meesha kasaaray nabadiidkii.
Ugudanbayna, wuxuu madaxwaynuhu carabka ku adkeeyay in maanta deegaanka soomaalidu yahay deegaan nabad ah oo horumar kajiro iyo in deegaanku nabadgalyadiisii intuu kufilaaday uu ugudbay inuu caawiyo nabadgalyodarida kajirta Soomaaliya.